पानीपुरीमा पिसाब मिसाइरहेको प्रत्यक्ष भेटियो (भिडियो हेर्नुस्) – Dainik Samchar
August 25, 2021 698
एजेन्सी । काठमाडौका सडक छेउमा पानीपुरी खाने युवायुवतीको भिड देखिन्छन् । कतिपय व्यक्ति पानीपुरी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । खासगरी युवायुवती यसको पारखी हुन्छन् । साँझको समयमा सडक किनारमा पानीपुरी खानेहरुको लाइन देख्न सकिन्छ । यस्तो पानीपुरी कति स्वास्थ्यकर हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल भने गरिदैन ।
भारतको आसामस्थित गुवाहाटी क्षेत्रमा पानीपुरीमा पिसाब मिसाएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ । ठेला सञ्चालक ६० वर्षीय अक्रुल सहानीलाई प्रहरी पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
पिसाब मिसाइरहेको भिडियो अमर ज्योती नामक फेसबूकबाट सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन भिडियो भाइरल बन्यो । भिडियोमा ठेलावालाले जगमा पिसाब गरेर पानीपुरीको पानीमा मिसाइरहेको देखिन्छ ।भिडियो
Prevकञ्चना ३ की अभिनेत्री मृत अवस्थामा भेटइन्
Nextघट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
आर्मी ब्यारेक भित्रवाटै बिरामी श्रीमान हराए, जुम्ल्याहा साना बच्चा छोडेर काठमाडौ खोज्न आइन् श्रीमती (भिडियो हेर्नुस्)
निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा सहयोग गर्दै श्वेता, लेखिन् यस्तो मनछुने स्टाटस्
केही दिन लगातार पिउनुहोस् यो स्पेसल ड्रिङ्क, ३६ को कम्मर हुनेछ २६
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीले गरे विवाहको लिखित सम्झौता ! (2377)
कोहलपुर दु’र्घट’ना अपडेट : ५ को मृ’त्यु (1560)
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (1502)
यिनै हुन् जसलाई मिल्यो गुगोल बाट ६० लाखको प्याकेज, आखिर के काम गर्छिन यी युवती ? (1430)
भाइरल झाक्रीलाई बान हा नेर मा रिएको खुलासा,यी मान्छे रहेछन् झाक्रीलाई बान हान्ने, कठै (भिडियो हेर्नुस्) (1302)